Mampisy fifandirana ny tononkira ka tsy afa-mifaninana amin’ny Eurovision 2021 i Belarus · Global Voices teny Malagasy
Tsy vahiny amin'ny fifandirana politika ny fifaninanan-kira Eurovision
Voadika ny 05 Avrily 2021 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, Português, English
Galasy ZMesta, Ny Belarosiana mpifaninana amin'ny Eurovision 2021, nesorina tamin'ny fifaninanana. Pikantsary avy amin'ny YouTube ATN.
Tsy navela handray anjara tamin'ny fifaninanan-kira Eurovision 2021, izay nokinasa hotontosaina ao Rotterdam, Holandy, amin'ny 18-22 mey 2021 ho avy izao i Belarus, rehefa tsikaritra fa “manitsakitsaka ny lalànan'ny fifaninanana” ny hira anankiroa mifaninana.
Ny European Broadcasting Union, izay tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ity fifaninanana isa-taona ity no nanintsana ny hira voalohany narakitry ny tarika Galasy ZMesta avy ao Belarus sy ny lohateny hoe “Я научу тебя” (“Hampianariko anao”), tamin'ny fiandohan'ny volana marsa, niangavy ny fahitalavi-pirenena Belteleradiocompany (BTRC) “handray ny dingana rehetra ilaina hanitsiana ny iditra amin'ny lanonan'ity taona ity mba hifanaraka amin'ny fitsipika mifehy ny fifaninanana.”
Ao anatin'ny fitsipika mifehy ny Eurovision, ny fahitalavi-pirenena na fahitalavi-panjakana isaky ny firenena no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny dingam-pifantenana ary miasa miaraka amin'ny artista hanamarina ny iditra amin'ny hirany. Tamin'ny faramparan'ny volana marsa, nampiditra ny hira faharoa avy amin'ilay tarika ihany ny BTRC, saingy hitan'ny EBU ihany koa fa mbola azo kianina izany hira izany.
Rehefa vita ny fehiny fa mbola manitsakitsaka ny lalànan'ny fifaninanana mba hiantohana fa tsy anaovana fitaovana na mitondra mankany amin'ny fifandirana ny hira vaovao nampidirina.
Koa satria tsy nahavita nampiditra hira azo fidiana tao anatin'ny fotoana farany nitarina ny BTRC, dia mapalahelo fa tsy handray anjara amin'ny fifaninanankira Eurovision faha-65 amin'ny volana mey i Belarus.
Hira Pop vs. politika
Na dia tsy niharihary loatra ara-politika aza ny hira voalohany nampidirin'ny GalasyZMesta, dia nahitana fanondroana miafinkafina ihany amin'ny adim-pahefana mitranga ao Belarus amin'izao fotoana izao. Ohatra, ny fiverenana, mifototra amin'ny lohatenin'ny hira, dia manao hoe: “Я научу тебя плясать под дудочку / я научу тебя клевать на удочку” (“Hampianariko anao ny handihy amin'ny lokangako/Hampianariko anao ny hitelina ny haza”). Efa mivandravandra ihany koa ny fanohanan'ireto mpihira ireto ny filoha Aliaksandr Lukashenka: maro amin'ireo hirany no ahitana fanesoana hanaratsiana ireo avy ao amin'ny fanoherana Belarosiana sy ireo mpandray anjara tamin'ny hetsika anti-governemanta nitranga vao haingana [mg].
Vakio teny malagasy bebe kokoa ny fisafotofotoana misy ao Belarus amin'izao fotoana izao
Samy nanana ny heviny ny mpikirakira aterineto rehefa nandre ny fandrarana. Ny lahatsary YouTube ofisialy tamin'ny hira faharoa (“Песенка” na “Hira kely”) nampidirin'ny tarika dia nahazo tia 3000, tsy tia 8000 ary fanehoan-kevitra mihoatra 3000 tao anatin'ny 48 ora voalohany. Raha naneho hevitra tamin'io lahatsary io, nilaza ny mpisera Volny Stsyag: “Tsara aloha rehefa tsy nanome fanandramana fahatelo ho anao ny Eurovision. Nihararetra aho mieritreritra hoe ho tahaka ny ahoana moa izany.”
Ny hafa, tahaka ny mpisera Sew Zavjalov, nihevitra fa efa nitongilana hatramin'ny fanombohany ny lalao: “Tsara, ry zalahy, noporofoinareo fa nidiran'ny politika ity fifaninanana ity. Nisy ny baiko hanesorana an'i Belarus amin'ny fifaninanana, ka dia nataony izany, ary nataonareo ihany izany, na dia nitendry mozika tsy misy teny aza ry zareo.”
Ao amin'ny tranonkalany ofisialy, nahariharin'ny tarika ny fankasitrahany ny governemantany, milaza fa “Tsy afa-mangina izahay raha mitady handrava ny firenena izay tianay sy ao ambanin'ny fampilazana ‘tolona politika’ ry zareo.” Nomarihan'ny mpaneho hevitra ihany koa ny safidim-pifaninana hampiditra hita amin'ny teny rosiana fa tsy anglisy na Belarosiana.
Ny lehiben'ny tarika Dmitry Butakov no niteny tamin'ny gazetiboky Esquire Russia fa tsy tampoka na hoe tsy nampoizina ny fanesorana ny tarika ary ny hira faharoa nampidirin-dry zareo dia “karazana anganon-kira… nosoratana ho amin'io manokana,” hanafenana ny tonony manafina politika.
Raha namaly ny fanapahan-kevitry ny EBU, Ivan Eismont, lehiben'ny BTRC milaza izany ho “ambadika politika” ary nohitrikitrihany fa “tafiditra tantara” ny Galasy ZMesta ary “nandresy tamin'ity Eurovision ity i Belarus.”
Tsy misy toerana ho an'ny mampiady hevitra
VAL, mpifaninana Belarus taona 2020, ao amin'ny video ofisialy amin'ny hirany “Da Vidna.” Pikantsary avy amin'ny YouTube.
Ny safidin'i Belarus tamin'ny Eurovision 2020, ny mpihira R&B/pop olon-droa ny tarika VAL, izay tsy nanambintana hanao fampisehoana ny hirany amin'ny fiteny Belarosiana, “Da Vidna” (“Mialoha ny fiposahan'ny masoandro”) noho ny valan'aretina, dia tsy nomena anjara toerana hifaninana ny taona 2021 taorian'ny antsafa maro izay nanoherany ny famoretan'ny governemanta ny hetsi-panoheram-bahoaka nanaraka ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Aogositra 2020.
Tsy vahiny amin'ny adihevitra ara-politika ny fifaninanan-kira Eurovision. Tamin'ny taona 2009, herintaona taorian'ny ady Rosiana-Georgiana, niangaviana hanova ny tononkirany mifaninana ny tarika Stephane & 3G, ilay tarika Georgiana voafantina hanao ilay fifaninanana isa-taona, izay manana lohateny mihantsy manao hoe “We Don't Wanna Put In,” [izay azo raisina hoe tsy mila an'i Potinina izahay] na mampiditra hira vaovao. Rehefa nandà ry zareo, dia tsy navelan'ny EBU hifaninana i Georgia tamin'ny taona 2009, raha nampiantranoana tao Moskoa izany.